Ubunlog yiprojekthi enikezelwe ekusasazeni nasekwaziseni malunga neendaba eziphambili, izifundo, amaqhinga kunye nesoftware esinokuyisebenzisa ngokusasazwa koBuntu, nakweyiphi na incasa yayo, oko kukuthi, iidesktops kunye nolwabiwo oluvela ku-Ubuntu njengeLinux Mint.
Njengenxalenye yokuzibophelela kwethu kwihlabathi leLinux kunye neSoftware yasimahla, u-Ubunlog ube liqabane lakhe I-OpenExpo (2017 no-2018) kunye Ukukhululeka I-2018 ezona ziganeko zibalulekileyo zecandelo eSpain.
Iqela lokuhlela lika-Ubunlog lenziwe liqela le iingcali kwi-Ubuntu, i-Linux, iinethiwekhi kunye nesoftware yasimahla. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Ukuthanda iitekhnoloji ezintsha, i-gamer kunye ne-linuxero entliziyweni, uzimisele ukuxhasa kangangoko. Umsebenzisi we-Ubuntu ukusukela ngo-2009 (karmic koala), oku kusasazwa kokuqala kweLinux endadibana nayo ndaza ndahamba nohambo oluhle kwihlabathi lomthombo ovulekileyo. Ngo-Ubuntu ndifunde lukhulu kwaye yayiyenye yeendlela zokukhetha ukuthanda kwam kwilizwe lophuhliso lwesoftware.
Umthandi phantse naluphi na uhlobo lwetekhnoloji kunye nomsebenzisi wazo zonke iintlobo zeenkqubo zokusebenza. Njengabaninzi, ndiqale ngeWindows, kodwa andikaze ndiyithande. Ukuqala kwam ukusebenzisa Ubuntu ngo-2006 kwaye ukusukela ngoko bendihlala ndinekhompyuter enye eqhuba inkqubo yeCanonical. Ndikhumbula ngovuyo xa ndafaka Ubuntu Netbook Edition kwilaptop ye-10.1 intshi kwaye ndonwabela Ubuntu MATE kwiRaspberry Pi yam, apho ndizama nezinye iinkqubo ezinje ngeManjaro ARM. Okwangoku, ikhompyuter yam ephambili ineKubuntu efakiweyo, ethi, ngokoluvo lwam, idibanise ezona zilungileyo ze KDE nezona zibalaseleyo kwisiseko soBuntu kwinkqubo efanayo yokusebenza.
Umthandi weenkqubo kunye nesoftware. Ndiqale ukuvavanya Ubuntu kwakhona kwi-2004 (Warty Warthog), ukuyifaka kwikhompyuter endiyithengisileyo ndayibeka kwisiseko somthi. Ukusukela ngoko nasemva kokuzama ulwabiwo olwahlukeneyo lwe-Gnu / Linux (Fedora, Debian kunye no Suse) ngexesha lam njengomfundi wenkqubo, ndahlala no-Ubuntu ukuze ndiyisebenzise yonke imihla, ngakumbi ngokulula kwayo. Ngaba ndihlala ndiqaqambisa xa umntu endibuza ukuba loluphi ulwabiwo endizolusebenzisa ukuqala kwihlabathi leGnu / Linux? Nangona oku kuluvo lomntu ...
Ndinomdla kwitekhnoloji kwaye ndiyakuthanda ukufunda nokwabelana ngolwazi malunga neenkqubo zokusebenza kweekhompyuter kunye noyilo. Ndiqale nge-SUSE Linux 9.1 nge KDE njengemo engqongileyo yedesktop. Ukusukela ngoko bendinomdla ngale nkqubo yokusebenza, indikhokelela ukuba ndifunde kwaye ndifumanise okungakumbi ngeli qonga. Emva koko ndiye ndangena nzulu kule nkqubo yokusebenza, ndiyidibanisa nemicimbi yoyilo lwekhompyuter kunye nokugenca. Oku kundikhokelele ekubeni ndenze ezinye iikhosi ukulungiselela abafundi bam isiqinisekiso se-LPIC, phakathi kwabanye.
Isazi ngembali kunye nesayensi. Injongo yam yangoku kukudibanisa la mazwe mabini ukusuka kumzuzu wokuphila kwam. Ndithandana nehlabathi le-GNU / Linux, kunye no-Ubuntu ngokukodwa. Ndiyakuthanda ukuvavanya ulwahlulo olwahlukeneyo olusekwe kule nkqubo inkulu yokusebenza, ke ndivulekile kuyo nayiphi na imibuzo onokuthi undibuze yona.
Isoftware evulelekileyo nevulekileyo yesoftware, ihlala ingachukumisi. Khange ndisebenzise ikhompyuter inkqubo yayo yokusebenza ayisiyiyo iLinux kwaye imeko-bume yedesktop yayo ayisiyeKDE iminyaka eliqela, nangona ndigcina iliso lam kwezinye iindlela ezahlukeneyo. Ungaqhagamshelana nam ngokuthumela i-imeyile ku-fco.ubunlog (at) gmail.com
Ubunjineli beKhompyuter kwiYunivesithi yaseBalearic Islands, umthandi weSoftware yasimahla ngokubanzi kunye no-Ubuntu ngokukodwa. Kudala ndikule nkqubo yokusebenza, kangangokuba ndiyisebenzisa kwimini yam yemini ukufunda kunye nokuba namaxesha okuzonwabisa.
Injineli yeKhompyuter, ndingumntu othanda iLinux, inkqubo, iinethiwekhi nayo yonke into enento yokwenza netekhnoloji entsha. Umsebenzisi weLinux ukusukela ngo1997. Owu, kunye nokugula okunguBuntu (engafuni kunyangwa), onethemba lokukufundisa yonke into ngale nkqubo yokusebenza.